Lafo vidy ny vokatra ka miteraka fankam-panahy ho an’olona maro na tomponandraiki-panjakana io na olon-tsotra fa indrindra ny mpandraharaha. Tao anatin’ny 5 taona namokarana lavanila dia tsy nisitraka ny vokatr’izany mihitsy ireo tantsaha satria tsy mety voafehy ny lafiny fandriampahalemana ao anatin’ilay fihariana. Sosonkevitra nentiko, hoy izy, dia ny fametrahana dina ao anatin’ilay faritra saingy voasembatsembana foana io ka tsy mety tafapetraka. Vao irosoana indray io izao satria raha ny mpitandro filaminana sy ny tobim-pitandroana izany ao amin’ilay faritra dia tsy hahasahana azy mihitsy. Tsy maintsy io fandraisana andraikitry ny fiarahamonina io ihany no vahaolana kanefa dia maro ny marisarisa hanao azy satria mahita tombony ao anatin’ny fikirakirana sy fiseraserana ireo vokatra. Mbola tsy matoy ny vokatra dia efa misy mpandraharaha miditra mandraviravy vola dia mahita an’iny ilay tantsaha dia matahotra sy mikoropaka dia mioty. Tonga koa avy any ny mpitandro filaminana dia manao ramatahora. Tonga koa ny fiakaram-bokatra ka mbola misy tantsaha mahavory vokatra maro dia misy andian-jiolahy mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika mangarona ireo vokatra any an-tokantrano. Kaominin’Ambanivohitry Tolongoina sy Maromiandra izao dia maro ny tantsaha voatafika eny an-tsaha sy voaroba ao an-trano amin’ny basy marovava. Ny mpitandro filaminana lavitra satria eo an-tampon-tanànan’Ikongo ny tobim-paritra na “chef lieu de district” dia 45 km miala an’i Tolongoina indray vao misy tobin’ny zandary iray. 48 km miala eo indray avy eo vao misy, hoy hatrany ity depiote ity.